ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏အစိတ်အပိုင်းလား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 9, 2011 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ယနေ့ညတွင်အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုရေးသားနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များအတွက်အတူတကွတည်ဆောက်ထားသည့်ပိုမိုအောင်မြင်သောနည်းဗျူဟာအချို့ကိုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ ၎င်းတို့သည်များစွာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲသုံးစွဲသူများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောကိရိယာများကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် သင်ယူမှုပုံစံ ၃ မျိုး မတိုင်မီ ... တမကြာခဏသတိမမူဖြစ်ပါတယ်။
ကွမ်းခြံကုန်း။ သင်၏ပရိသတ်အများစုသည်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုသင်ယူခြင်းထက် kinesthetic သင်ယူခြင်းကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းတို့ကိုကူညီသည့်ကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ် application ရှိသလား။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါကသင့် site မှတုန့်ပြန်မှုနှုန်းသိသိသာသာတိုးလာသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဥပမာအချို့ရှိပါတယ်။
အွန်လိုင်းတည်နေရာရှာဖွေသူ - Wild Birds Unlimited ၏အွန်လိုင်းရောက်ရှိမှုသည်လူများကိုလူများပိုင်ရှင်များထံတိုက်ရိုက်မောင်းထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်နေရာစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းကိုမိုဘိုင်းပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၎င်းကို Facebook အက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်ထုတ်ဝေတော့မည်။
အားကစား Fan ဇယား - Pat Coyle တစ် ဦး ပြေး အားကစားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုပေးချင်တယ် သူ၏ ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်ကို ... အားကစားစျေးကွက်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Pat ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာတည်ရှိမှုကိုဖော်ပြရန်အွန်လိုင်းကိရိယာတခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ထိုအလုပ်ခဲ့တယ်!
အကြွေးတွက်ချက်မှု - CCRnow သည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သူတို့၏အလားအလာများကို၎င်းတို့၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အကြွေးနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တကယ်ငွေပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းများပေးလိုသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရှေ့တည့်တည့်အတိုးတွက်ချက်မှုဟုထင်လျှင်သင်မှားနေသည်! ယခုဤကိရိယာသည်အသုံးပြုသူအား CCRnow ၏အကူအညီဖြင့်အကြွေးမည်မျှမြန်နိုင်ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်မှုပေးသည်။
ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနများကသူတို့အထဲကို ၀ င်လာတဲ့အွန်လိုင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာစစဉ်းစားလာတဲ့အခါဒီဖြေရှင်းချက်တွေဟာရေဒီယိုမှာရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးကိရိယာတွေကသူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းတယ်။ သူတို့နှင့်အတူ။ ဒီဖြေရှင်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကဒီလောက်စျေးကြီးတယ် - အားလုံးကဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာအောက်လောက်ပဲရှိတယ်။
သုံးစွဲသူများ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သင်နှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကဘာတွေဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မလဲဆိုတာစစဉ်းစားဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံစာသားနှင့်ဗီဒီယိုသည်မလုံလောက်ပါ။